Homeတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး07 Antalyaပန်းသီးဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်လေ့လာစရာများ Continues
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 07 Antalya, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
ပန်းသီးဘတ်စ်ကား terminal ထဲသီချင်းလေ့လာမှုများ suruyor ဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကတည်ဆောက်လိမ့်မည်သည့် Apple, ထိုဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်စီမံကိန်း၏မြေပြင်အလုပ်နှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်တူးဖော်စတင်ခဲ့သည်။ solar ပြား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်မီးထုတ်လုပ်တံ့သော terminal ကို၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရှုထောင့်မှကျေးဇူးတင်စကားလည်းထွက်ရပ်။
Elmali Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သစ်တစ်ခုဘတ်စ်ကားဘူတာရုံရောက်စေဖို့အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် xnumx'l ကတည်းကအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ပေမယ့်ဒီနေ့ရဲ့ Apple ကဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်များ၏လိုအပ်ချက်များတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးနှင့်ခေတ်မီမျက်နှာအတူသစ်ကို site ကိုမှလာမယ့်သစ်တစ်ခုဝန်ဆောင်မှုကို Apple ပြည်နယ်ဆေးရုံကိုငါပေးမည်။
အခြေခံတူးဖော်အလုပ်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်း Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သိပ္ပံရေးရာ Elmali ကာလ Terminal နှင့်စီမံကိန်း၏ဦးခေါငျးကဆောင်ရွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10.400 mxnumx'lik လယ်ပြင်ပေါ်တွင်ဆောက်လုပ်ထားလိမ့်မည်။ Apple က Terminal နှင့်2mxnumx တစ်မိုးဧရိယာရှိပါလိမ့်မယ်။ 2.700 ဘတ်စ်ကားစီမံကိန်း, လက်မှတ်ရုံးများ, Semi-ပြင်ပနှင့် Indoor စောင့်ဆိုင်းဒေသများ, ဗလီ, အမိုးအကာ, စာတိုက်, စားသောက်ဆိုင်များတွင်ပင်လယ်အော်နှင့်အတော်ကြာဆိုင်များ, ရဲ, စည်ပင်သာယာရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးများ, ဝန်ထမ်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအခန်းပေါင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းတစ်ခန်းနှင့်ပြင်ပယာဉ်ရပ်နားတပ်ဆင်ထားကြသည်။ ဒီနေ့ကိုတုံ့ပြန်ရန်ကိရိယာများနှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတူ terminal ကိုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်ပါဝါများအတွက်ဝယ်လိုအားနှင့်အတူဘတ်စ်ကားဘူတာရုံ၏အဘို့ကိုဖုံးလွှမ်းခံရဖို့ဆိုလာပြားများနှင့်ဖုံးလွှမ်း terminal ကိုခေါင်မိုးရရှိခဲ့သည်။ အသစ်ဘတ်စ်ကား terminal ကိုမြို့အလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်နှင့်၎င်း၏ခေတ်သစ်မျက်နှာနဲ့အတူ Apple က၏နိုင်ငံသားများအစေခံရန်။
ဥက္ကဋ္ဌ OZTURK FROM မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ခရိုင်ခရိုင်၏အသစ်တစ်ခုဘတ်စ်ကား terminal ကိုအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ထိုဒေသတွင် Elmali မြို့တော်ဝန် Halil Ozturk ထွက်သယ်ဆောင်အလုပ် ပတ်သက်. အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်အသစ်သောဘတ်စ်ကား terminal ကိုဧရိယာနှင့်သတင်းအချက်အလက်သွားရောက်ကြည့်ရှုစေပါလိမ့်မည်ဟုသူကဆိုသည်: "သစ်ဘတ်စ်ကား terminal ကိုပိုကောင်းElmalımızရရှိသည်။ Terminal နှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားများအတွက် Antalya တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Muhittin အလုပ်အကြှနျုပျ၏ခရိုင်ကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
ရွှေတိုးတက်မှုအတွက်အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်လုပ်ငန်းခွင်ခဲ့သည် 28 / 08 / 2018 အဆိုပါအဝေးပြေးကား Terminal နှင့်မှာလမ်းအောက်တွင်လေ့လာမှုများရွှေတပ်မတော်ခရိုင်အတွင်းရှိမြူနီစီပယ်ကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Yilmaz "ဟု The စီမံကိန်းတွင်မြို့တော်ရဲ့အသွားအလာနှင့် minibuses လျှော့ချပါလိမ့်မယ်တဦးတည်းအိမ်ခေါင်မိုးအလုပ် 70 ရာခိုင်နှုန်းသာမှုနှုန်းပြီးစီးခဲ့ပြီးအောက်ရှိခရိုင်စုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုသွားမှာပါ" ဟုသူကပြောသည်။ မြို့ Toki နှင့် Memurkent ပြဿနာအတွက်အသက်ရှင်လျက်Altınorduခရိုင် Eskipazar ရာထူးစုစုပေါင်း 22 တထောင် mxnumxlik ဧရိယာမြို့တော်ရဲ့အပေါ်သစ်ကို terminal ကိုတညျဆောကျရှည်လျားသောလိုအပ်ခဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌပိုပြီးဘဝ Yilmaz ထားမယ်လို့ကိုယ်စားပြုအရေးပါတဲ့စီမံကိန်းကို Enver "2 သန်း TL ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့လုပ်စီမံကိန်းများလိုအပ်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ခံရဖို့အသစ်ကဘတ်စ်ကားဘူတာရုံစီမံကိန်းကိုနှင့်အတူမြို့ရဲ့နေ့စဉ်ယာဉ်ကြော ...
နယူးတောင်တက်စတင်များတွင်စဉ်ဆက်မပြတ် hinge အဝေးပြေးကား Terminal နှင့် 07 / 12 / 2018 ကစတင်ခဲ့သည်မပြတ်မတောက်အချိန်နာရီနာရီ 07.12.2018 အကူးအပြောင်းလိုင်းများမှအသစ်သောလမ်းကြောင်းများထို့အပြင်နှင့်အတူ 24 သောကြာနေ့ hinge နယူးအဝေးပြေးကား terminal ကိုအစေခံရန်စတင်မည်ရာဆောက်လုပ်ရေးများကဆောက်လုပ်ပြီးစီး Mugla မြူနီစီပယ်နှင့်။ အဆိုပါမြေပြင်နှင့်အတူပတ္တာ Terminal နှင့် 07.12.2018 01.00 နာရီအဖြစ်သောကြာနေ့ညဥ့်အကြားလုပ်အစီအမံများနှင့်ပြုမိခံရဖို့YeniköyKötekliဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူ 07.00 ။ Mugla တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တွင်တည်ရှိသည်နှင့်တစ်ထောင် 11 186 400 အတွက်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသန်း TL ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတကုန်ပစ္စည်းများ hinge အဝေးပြေးကား Terminal နှင့် လုပ်. , 07.12.2018 လိုအပ်ချက်သောကြာနေ့စတင်ဝတ်ပြုကြလော့။ ခေါင်မိုးပေါ်နေရောင် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Apple ကစီးတီးဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရေး 06 / 12 / 2018 Apple ကစီးတီးဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရေး ANTALYA စည်ပင်သာယာသိပ္ပံရေးရာဌာန Apple ကခရိုင်ဘတ်စ်ကား terminal ကိုဆောက်လုပ်ရေး, 4734 အမှတ်အဘို့အကျင့်ကိုကျင့်၏ဆောက်လုပ်ရေးအပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 624814 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Yüksekalan Mah ။ Adnan Menderes Bulv ။ အမှတ် 20 07310 MURATPAŞA / ANTALYA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2422495230 - 2422495493 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https://ekap.kik.gov.tr/: fenisleri@antalya.bel.t သုံးခုသည်) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် က) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနုမှ ECAP / 2-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Apple ကစီးတီးဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရေး 29 / 01 / 2019 အဆောက်အဦးဝယ်ယူရေးအသိပေးစာ ANTALYA စည်ပင်သာယာသိပ္ပံရေးရာဌာန Apple ကခရိုင်ဘတ်စ်ကား terminal ကိုဆောက်လုပ်ရေး, 4734 အမှတ်အဘို့အကျင့်ကိုကျင့်၏ဆောက်လုပ်ရေးအပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 25753 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Yüksekalan Mah ။ Adnan Menderes Bulv ။ အမှတ် 20 07310 MURATPAŞA / ANTALYA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2422495230 - 2422495493 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https://ekap.kik.gov.tr/: fenisleri@antalya.bel.t သုံးခုသည်) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် ၏နူးညံ့သောဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏ ECAP / 2-အကြောင်းအရာ ...
ရွှေမပြတ်မတောက်၏လေ့လာမှုမှာအဝေးပြေးကား Terminal နှင့်အဆောက်အအုံ Continues ခဲ့သည် 24 / 11 / 2018 အဆိုပါမြို့တော်မြူနီစီပယ်, အချင်းချင်းမြို့ဘတ်စ်ကား terminal ကိုသဖြင့်ရွှေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကမပြတ်မတောက်ဆက်လက်ညာဘက်ဘေးနားရှိလက်စွပ်လမ်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် built ခံရဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Tekintaş, Altınorduဘတ်စ်ကားဘူတာရုံစီမံကိန်းပြီးစီးသည့်အခါခရိုင်အတွင်းရှိခေတ်မီအဆောက်အဦး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့ကတပ်မတော်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ ကြောင့်အသစ်ကဘတ်စ်ကားဘူတာရုံမှ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးမပြတ်မတောက်ဆက်လက်လိုအပ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်ကတည်းကသမ္မတTEKİNTAŞ "Model နဲ့ WE ခေတ်မီအဆောက်အဦးတည်ဆောက်ကြမည်" ရွှေဒီနေ့အလုပ်၏ဗဟိုအတွက်ကန့်သတ်ဧရိယာ၌အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခရိုင်၏ဟောင်းများကိုဘတ်စ်ကား terminal ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ နိုငျငံတျောသမ်မပီတာ, စီမံကိန်းကိုအချိန်တိုအတွင်းTekintaşခုနှစ်တွင်ပြီးစီးကြောင်းဖော်ပြထားသည် "ရွှေလက်ဝါးကပ်တိုင်မြို့ဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်စီမံကိန်းများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်။ terminal ကိုစီမံကိန်းအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မြို့ရိုးကို ...
ရွှေတိုးတက်မှုအတွက်အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်လုပ်ငန်းခွင်ခဲ့သည်
နယူးတောင်တက်စတင်များတွင်စဉ်ဆက်မပြတ် hinge အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Apple ကစီးတီးဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရေး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Apple က-Seki လမ်းမကြီးစစ်တမ်းနှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေး
TCDD မှFevipaş - Malatya လိုင်းKapalıder - Elmalıအမျိုးမျိုးသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ရလဒ်နူးညံ့သောအလုပ်ဖြစ်တယ်
TPC 13 ။ Kalkan - Sinekçibel - သူ Elmali လမ်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်